प्रेम सञ्जेल माथि कार्यकक्षमै आ’क्रम’ण गर्ने महिला कर्मचारी निष्कासित
August 3, 2020 748
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल माथि कार्यकक्ष मै कु’टपि’ट भएको छ । भ्र’ष्टाचार वि’रुद्ध ख’रो अभिव्यक्ति दिँदै आएका उपसचिव सञ्जेलमाथि शनिबार बिहान करिब ११ बजे कार्यकक्षमै कु’टपि’ट भएको हो ।
कु’टपि’टमा संलग्न भएको आरोप’मा प्रह’रीले दुई महिला कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई र मेनुका सापकोटा कोइरालालाई नियन्त्रण’मा लिएकोहो । उनीहरु दुबै करारका कर्मचारी हुन् ।
सञ्जेलमाथि पेपर वेटको डल्लो, चप्पल, पञ्चिङ मेसिन लगायत प्र’हार भएको प्रहरीले बताएको छ । कु’टपि’टबाट सञ्जेलको अनुहारमा चो’ट लागेको छ ।
जिल्ला प्र’हरी कार्यालय मोरङका प्र’हरी उपरीक्षक उपरीक्षक सन्तोष खड्काले कु’टपि’ट गर्ने कर्मचारी र सञ्जेलको वि’वाद बारे बुझ्ने काम भइरहेकमे बताए ।
प्र’हरी स्रोतका अनुसार सञ्जेलसँग छलफल गर्नु छ भन्दै कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका दुई जना कर्मचारीले काममा पे’लेको र गा’लीगलौज गरेको भन्दै कु’टपिट गरेको बताएका छन् ।
यसैबीच आईतबार सञ्जेलले आफूलाई कार्यकक्षमा कु’टपि’टगर्ने कर्मचारीलाई कामबाट निकालेका छन् । घ’टना भएपछि प्रहरीले दुबैपक्षसँग छलफल गरेको थियो र मि’लापत्र गराउन चाहेको थियो । तर सञ्जेलले ब’दमान गराउछौं भन्दै कु’टपि’ट गरेको भन्दै सहमति गर्न मा’नेनन् ।
Prevठेलामा छोरो बोकेर हिड्ने अर्जुनले चलाए कार, राता रात कसरी यस्तो ? ..हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextश्रीमतीको चर्तिकला र अर्जुनको बास्तबिकताबारे गाउँले छर्लंग पारे (हेर्नुहोस भिडियो)
कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड–माधवको ‘अफर’
रुपा सुनार घटनाबारे शिव परियारले लेखे लामो स्टाटस: “मायालु पारामा बोलेर विभेद गरियो”
साउनमा किन खान हुँदैन माछामासु ? यस्तो रहेछ वैज्ञानिक कारण